एक्लै यौ-न सन्तुष्टि कसरी पाउने ? « Swadesh Nepal
एक्लै यौ-न सन्तुष्टि कसरी पाउने ?
दुई व्यक्तिबीच शारीरिक सम्पर्क गरेर यौ%न सन्तुष्टि लिने प्रक्रिया सबैभन्दा सहज प्रक्रिया हो तर सधैँ यो सम्भव हुन्न । विवाह पछिको अवस्थामा समेत श्रीमान्–श्रीमती सधैँ सँगै नहुन सक्छन् । हाम्रो समाजमा विवाहअगाडि शारीरिक सम्पर्कको माध्यमबाट यौ%न सन्तुष्टि लिनु सामाजिक रुपमा समेत जटिल छ । अझै पनि हाम्रो समाजमा यौ%न सम्बन्धलाई चरित्र र सामाजिक प्रतिष्ठासँग जोडेर हेर्ने गरिन्छ । यसले पनि एक्लो अवस्थामा यौ&न सन्तुष्टि लिन महिलालाई गाह्रै छ ।
तर विवाहित हुन् या एक्लो महिला, यौ&न चाहनालाई निषेध गर्न सम्भव छैन । शारीरिक, मानसिक, सामाजिक र आध्यात्मिक कोणबाट समेत यौ&न चाहनालाई केही समय पर धकेल्न सकिएला तर पूरै नियन्त्रण गर्न सम्भव छैन । यो प्राकृतिक नियम नै हो ।
यौ%नसँग शारीरिक चाह मात्रै जोडिन्न । योसँगै भावनासमेत जोडिएर आउँछ । त्यसैले विवाहित हुन् या अविवाहित, आफ्नो जोडीसँगको सुरक्षित सम्बन्ध नै यौ&न सन्तुष्टिको प्राकृतिक प्रक्रिया हो । यस्तो सम्भव नभए यसका सुरक्षित विकल्प पनि छन् तर यी विकल्प स्थायी हैनन् ।
पहिलो विकल्प आफ्नो यौ%ना-ङ्गमा आफैंले घर्षण गर्ने नै हो । आफ्नो स्त$न आफैं माड्ने, यो&नी चलाउने गरेर यौ%न चाहना मेटाउन सकिन्छ । हातका औँलाले यौ%ना-ङ्ग चलाउँदा यौ%न रसादि निस्किन्छ । यौ%न रसादि निस्किँदा आनन्द अनुभव हुन्छ । यो सुरक्षित प्रक्रिया पनि हो ।
पछिल्लो समय यौ%न सन्तुष्टिका लागि यौ%न खेलौनाको प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति पनि बढेको देखिन्छ । पश्चिमा मुलुकसँगै नेपालमा समेत से-क्स टोय सहज रुपमा पाउन थालेको छ । अहिले त से-क्स रोबोटसमेत बनिसकेका छन् ।
तर स्वास्थ्य र यौ%न सन्तुष्टिका हिसाबले यौ%न खेलौना स्वस्थ अभ्यास भने हैन । प्राकृतिक रुपमा (यौ%न जोडीसँग) यौ%न सम्पर्क गर्दा यो%निबाट यो&नि रसायन निस्कन्छ । त्यसैले यौ&नानन्द तथा यौ&न सन्तुष्टि प्राप्त हुन्छ । से-क्स टोयको प्रयोग गर्दा केही समय आनन्दको अनुभव हुनसक्ला तर यो भरपर्दो हुन सक्दैन ।
शारीरिक रुपमा यौ%न सम्पर्क गर्दा शारीरिक मात्रै हैन एकअर्काबीच भावनासमेत साटासाट हुन्छ । प्राकृतिक सह-वासमा शरीरसँगै भावना समेत मिसिन्छ । शरीरसँगै मानसिक रुपमा समेत आनन्द पाउन सकिन्छ ।
से-क्स टोयको प्रयोगले शारीरिक सन्तुष्टि त पाउन सकिएला तर मानसिक सन्तुष्टि सम्भव हुन्न । यसले क्षणिक रुपमा शारीरिक आवश्यकता पूरा हुन्छ तर दीर्घकालमा मानसिक रुपमा नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ । त्यसैले यौ&न जीवनमा सकेसम्म प्राकृतिक प्रक्रिया नै अपनाउनु पर्छ । प्राकृतिक प्रक्रिया नै शारीरिक र मानसिक स्वास्थ्यका लागि लाभदायक हुन्छ ।सुक्रबार साप्ताहिक